UBUNGAKANANI BETUBHU ESHUSHU (ISIKHOKELO ESISEMGANGATHWENI KUNYE ESIDUMILEYO) - AMACHIBI OKUDADA
Eyona amachibi Okudada Ubungakanani beTubhu eshushu (Isikhokelo esiseMgangathweni kunye esiDumileyo)
Ubungakanani beTubhu eshushu (Isikhokelo esiseMgangathweni kunye esiDumileyo)
Nasi isikhokelo sethu kubungakanani bemigangatho eshushu ebanzi kubandakanya ubungakanani beespas ezincinci, eziphakathi kunye ezinkulu.
Ke ufuna ibhafu eshushu, kodwa awuqinisekanga ukuba bubungakanani? Ukuba usebenza ngendawo eqinileyo, bamba iteyiphu yakho yokulinganisa kuqala. Gcina ukhumbula ukuba uyakufuna u-12-18 wemvume kwindawo yonke eshushu.
Ukuba unayo eyadini enkulu okanye ipatio, zibuze ukuba bangaphi abantu olindele ukuba babamemele kwibhafu eshushu ngaxeshanye. Emva koko unokucutha ukukhangela ngokujonga kwiimodeli ubuncinci ezo zihlalo.
uthini umahluko phakathi kwe-ms. kwaye uphuthe
Umgangatho oshushu weTub
Iibhubhu ezincinci ezishushu (2-4 Abantu)
I-Tub eshushu ephakathi (Abantu aba-4-6)
Ibhafu enkulu eshushu (7+ Abantu)
Itshathi yoMgangatho oshushu weTub
Tub eshushu Imilinganiselo 2 umntu
Imilinganiselo yeTub eshushu yomntu ongu-4
5 Ubungakanani beTubhu eshushu
Imilinganiselo yeTub eshushu 6 Umntu
Ubungakanani beTubhu eshushu yomntu
Imilinganiselo yeTub eshushu 8 Umntu
Iindleko zokuSebenzisa iThubhu eshushu
Ubunzima beTub eshushu
Ubungakanani beTub ePhuthi ePhezulu
Ngelishwa, akukho nto injengobungakanani bethabhu eshushu esemgangathweni. Umzekelo, ibhafu eshushu yabantu abane, inokuthi ilingane kuphela abantu abadala ababini okanye abathathu, kuxhomekeke kubukhulu bayo, imilo, kunye nemfuno yendawo yabo.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, ukumiliselwa kwezihlalo, ubunzulu bamanzi, kunye nobubanzi kunye nobubanzi bethuba konke kunokuhluka kakhulu ukusuka kwimodeli enye yebhafu eshushu ukuya kwenye.
Ngakolunye uhlangothi, oku kuhle - kungakhathaliseki ukuba zeziphi izinto ozikhethayo, unesiqiniseko sokufumana ityhubhu eshushu efanelekileyo. Kwelinye icala, yenza kube nzima ukuthelekisa okanye ukunciphisa iindlela onokukhetha kuzo.
Iivenkile ezitshisayo zebhafu yeqela elishushu kwiibhafu ezintathu - encinci, ephakathi, kwaye enkulu .
Iibhafu ezincinci ezishushu zezi zinemilinganiselo kolu luhlu lulandelayo: Ubude: 5'4 kuye ku-7 ″ Ububanzi: 5'4 kuye ku-6'8 Ukuphakama: 29 - 35. Bahlala abantu ababini okanye abathathu.
Izihlalo zebhafu eshushu ephakathi phakathi kwabantu abane nabathandathu. Uninzi lwee-tubs ezishushu ziphakathi. Ubude bungaqala kwi-6'6 kuye kwi-7'9. Ububanzi buphakathi ko-6'4 ukuya ku-7'9. Ukuphakama kwetyhubhu eshushu ephakathi kunokuba naphakathi kwe-33 ukuya kwi-38.5 H.
Ukuba ibhafu eshushu inokuhlala abantu abasixhenxe okanye nangaphezulu, ithathwa njengenkulu. Ezi ziimitha ubuncinane ezisixhenxe ubude nobubanzi. (Umthombo Ibhoyila )
Eyona modeli inkulu sele yenziwe yenziwe inobude be-9 'kunye nobubanzi be-9'2. Iibhafu ezinkulu ezishushu zihlala zimi kuma-36 ukuya kuma-38 ubude.
Ngaphandle kobude, ububanzi, nokuphakama, kukho imilinganiselo yesithathu eqala ukusebenza xa kuthathelwa ingqalelo ityhubhu eshushu: ubunzulu bamanzi.
Ngokwesiqhelo, ibhafu eshushu igcwaliswa de amanzi abe malunga nee-intshi ezintlanu ukusuka kongqameko. Ubungakanani bomzimba wakho ongaphantsi kwamanzi buxhomekeke ngokuyinxenye kubungakanani kunye nokumila komzimba wakho, kodwa kubungakanani kunye nokumila kolwakhiwo oluxhasayo.
Ezinye izihlalo zebhafu eshushu ziphantsi kakhulu, ngelixa ezinye zingaphezulu. Abantwana kunye nabantu abadala abafutshane banokukhetha isihlalo esingekho nzulu. Abantu abadala abade bathande ukuhlala kwizitulo ezinzulu.
Bonisa amangeniso ayi-102550100 Khangela:
Ubungakanani beTub eshushu (Uluhlu)
Abancinci (abantu aba-2 ukuya ku-4) 5'4 ukuya ku-7 ' 5'4 ukuya ku-6'8 29 - 35
Phakathi (abantu aba-4 ukuya ku-6) 6'6 ukuya ku-7'9 6'4 ukuya ku-7'9 33 ukuya kuma-38.5
Enkulu (7+ Abantu) 7 '+ 7 '+ 36 ukuya ku-38
Ibonisa i-1 ukuya kwi-3 yokungena Ngaphambili Okulandelayo
Esinye sezona zitya zincinci zimbini zabantu ezishushu ezikhoyo zi-6'6 ubude, 3'7 ububanzi, kunye ne-2'9 kuphela. Inokuhlalisa abantu ababini abahleli ubuso ngobuso, kodwa ukuba ungathanda ukuzolula, inokusetyenziswa yodwa kuphela.
Umndilili, isikwere, ibhafu eshushu yezihlalo ezine inokuba yi-6'2 ubude, 6'2 ububanzi, kunye 2'10 ukuphakama. Nangona ezi modeli zipapashwa kubantu abane, zihlala zikhululekile xa zimbini okanye zintathu.
Umjikelo omnye, umfuziselo wabantu abahlanu webhafu eshushu ulinganisa u-6 ubukhulu kunye no-2'9 ukuphakama. Esinye isikwere, imodeli yebhafu yabantu abashushu inokulinganisa i-71 ’ubude nobubanzi, kwaye ibe yi-3 ubude.
Ibhafu eshushu eneejethi ezininzi iya kufuna amandla ongezelelweyo kunye noomatshini ukuze iqhubeke, kwaye ikhokelele koxande, endaweni yesikwere, uyilo. Umzekelo omnye wabantu aba-6 baneejets ezingama-57, ziyi-7'8 ubude, 8'4 ububanzi, kunye no-2'10 ukuphakama.
Imodeli yokubhabha eshushu enye, eyikwere, enezihlalo ezisixhenxe inobude nobubanzi obungu-7'10, nokuphakama ko-3. Kuza kuxhotyiswa ngezihlalo ezibini ezingangxamanga.
Imodeli yoxubha eshushu yoxande, enezihlalo ezisibhozo enomlinganiso omnye wokuhlala isitayile, ngokomndilili, i-11 iinyawo ubude, iinyawo ezisibhozo ububanzi, kunye neenyawo ezintathu ubude.
Iindleko zokuqhuba ityhubhu yakho eshushu iya kwahluka kwizinto ezininzi ezinje ngeqondo lobushushu olimiselayo kunye nokuba lisetyenziswa kangaphi. Nangona kunjalo, umndilili weendleko zokusebenzisa ibhafu eshushu iya kuba neendleko ezingaphantsi kwe- $ 1 ngosuku ukuze usebenze.
Ibhafu encinci eshushu kufuneka ixabise malunga ne-7 ukuya kwi-10 yeedola ngeveki kwaye ibhafu enkulu eshushu kufuneka ixabise malunga ne-10 ukuya kwi-15 yeedola ngeveki.
Kuphononongo olwenziwe kwisiza sePhuli kunye ne-Spa, iipesenti ezingama-69.5 zabantu baxela ukuba ngokomndilili, ngabantu ababini kuphela abasebenzisa ibhafu yabo eshushu ngaxeshanye. Ngale nto ithethwayo, umntu unokufuna ukuqaphela iimfuno zabo ezizezinye xa kufikwa ekuthengeni ityhubhu eshushu yokuqinisekisa ukuba bafumana eyona modeli yezona mfuno zabo.
izipho zeendwendwe zabashakazi
Ibhafu eshushu engenanto ihlala inobunzima phakathi kwama-500 ukuya kwi-1000 lbs. Ukuqinisekisa ukuba unenkxaso eyaneleyo yolwakhiwo, isiseko sakho kufuneka sikwazi ukumelana nobunzima betbhu kuphela kodwa namanzi nabahlali.
Ibhafu encinci eshushu egcwele amanzi kwaye abantu baya kuba nobunzima malunga ne-3,000lbs. Ishubhu eshushu esisezingeni eliphakathi kwimeko efanayo iya kuba nobunzima malunga ne-4,500lbs kwaye ityhubhu enkulu eshushu inokulindeleka ukuba ibe nobunzima kwi-5,500lbs.
Iibhafu ezishushu zinokubekwa kumgangatho wokhuni ukuba kukho inkxaso eyoneleyo, kodwa uninzi lwabanini bamakhaya bakhetha ukugalela iphedi yekhonkrithi endaweni yoko. Iphedi kufuneka ibe, ubuncinci, ubungakanani obufanayo nebhafu eshushu.
Ukuba izinyuko ezingaphandle ziya kufuneka ukuze kungeniswe ibhafu eshushu, iphedi kufuneka ibe nkulu ngokwaneleyo ukulungiselela ezo zikwanabo.
Ukufumana umxholo onxulumene noko ndwendwela inqaku lethu malunga IJucuzzi vs ibhafu eshushu .
Unina weengubo zomtshakazi kunye nobukhulu
ufuna ntoni ukutshata ecalifornia
ixabisa malini isipho somtshato
iikhabhathi zekhitshi lebhedi
indlela yokukhetha umfoti wezithombe
zibiza malini iindawo zomtshato